Tuesday December 08, 2020 - 07:07:10 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Taliska ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa ku dhawaaqay in sanadka soo socda uu noqon doono mid kalaguur ah oo ammaanka Soomaaliya uu ku imaan doono isbedel weyn sida hadalka loo dhigay.
Francisco Madeira oo ah ergayga Ururka Midowga Afrika ee maamula ciidanka AMISOM ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaashii ugu dambeeyay ee ay ugu diyaar garoobayaan in dhammaan ciidamada shisheeye looga saaro Soomaaliya.
Isagoo khudbad ka jeedinayay shir ballaaran oo shalay ka dhacay xerada Xalane ee magaalada Muqdisho ayuu ka shanqariyay in sanadda 2022 lasoo gaba gabayn doono howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya islamarkaana ammaanka lagu wareejin doono ciidamada DF!.
Wuxuu carabaabay in inta lagu gudajiro sanadda 2021 ay AMISOM aad udhimi doonto joogitaanka ciidamadeeda ee gobollada dalka si loogu diyaar garoobo ka bixintaanka dhammeystiran ee dhici doona sanadka xiga.
Caddeymaha ka yimid Francisco Madeira ayaa muujinaya in soo duulayaasha Afrikaanta uu waqtigu kasii idlaanayo iyagoo aan xaqiijin hadafkii duullaankooda oo ahaa in ay Soomaaliya ka tirtiraan awoodda jihaadiga ah iyo in ladumiyo wilaayaatka Islaamiga ee dalka ka hirgeliyay ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Khubarada dhanka ammaanka ayaa aaminsan in haddii ay ciidamada shisheeye isaga baxaan Soomaaliya ay jihaadiyiinta Al Shabaab dib ula wareegi doonaan dhowr magaalo oo dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka islamarkaana aysan maleeshiyaadka dowladda awood ulahayn difaacashada meelaha ay baneeyaan ciidamada shisheeye.